यस्तो कसैको नहोस् : विवाह सकेर बिदाईको क्रममा अचानक बेहुलीको मृत्यु भयो !
काठमाडौं । विवाहका दिन अर्धचेत भएकी एक महिलाको मृत्यु भएको छ । भारत, ओडिशाको सोनेपुरमा विवाह समारोहको उल्लास शोकमा परिणत भएको हो । बिदाइको क्रममा दुलहीको अचानक मृत्यु भएपछि उक्त विवाह शोकमा परिणत भएको हो ।
विवाह समारोहमा उपस्थित सबै यस घटनाले स्तब्ध भएका छन् । जानकारी अनुसार दुलही बिदाइको समयमा लगातार रुँदै थिई । उनी यति चिच्याई कि उनलाई अचानक हृदयघात भयो । रुँदै गर्दा उनी बेहोश भएर भुईमा घोप्टो परिन् ।
तर दुःखद कुरा के भने उनको घटनास्थलमै निधन भयो । हृदयघातले दुलहीको ज्यान लिएपछि दुबैतर्फको परिवार दुःखी भएका छन् । घटना पछि परिवारका सदस्यहरू रोइरहेका छन् । यो घटना सोनपुर जिल्लाको जुलान्डा गाउँको हो ।
त्यहाँ बस्ने मुरली साहूकी छोरी रोजीको विवाह बालांगिर जिल्लाको तेतालगाँव निवासी बिस्सीसन भन्ने युवकसँग भएको थियो । गत बिहिबार, केटीको विवाह जुलुस लाग्यो र विवाहको सबै विधिहरू पूर्ण कानूनी अभ्यास संगै सम्पन्न भयो ।
बिदाइको समय शुक्रबार बिहान घर आउँदा दुलही रुँदै परिवारलाई अँगालो हाल्दै थिइन् । उनी लगातार ठूलो आवाजमा रोइरहेकी थिइन् । परिवारले उनलाई शान्त पार्न खोजिरहेका थिए ।
यसैबीच, उनी अचानक बेहोस भएर लडेर यो संसारबाट विदा भएकी हुन् । दुलही बेहोश भई भुइँमा लडिरहेको देखेर त्यहाँ हलचल मच्चियो । तुरुन्तै मानिसहरूले दुलहीको अनुहारमा पानी छर्किए र उनलाई होसमा ल्याउने कोशिश गरे उनको पाखुरा र खुट्टामा मसाज पनि गरेका थिए ।
जब यसले कुनै फरक परेन, परिवार तुरुन्तै नजिकैको अस्पतालमा पुर्याए । त्यहाँ डाक्टरले मृत घोषित गर्दिएका हुन् । सूचना पाउने बित्तिकै अस्पताल पुगेर प्रहरीले युवतीको लाश पोष्ट मार्टम गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त मृत्युले गाउँलेहरू अत्यन्तै शोकित छन् ।
एक जना गाउँलेले भने कि रोजीको बुबाको केही समय अघि नै मृत्यु भएको थियो । यस पछि उनी धेरै निराश थिइन् । रोजीका मामाले केही सामाजिक कार्यकर्ताहरूको सहयोगमा उनको बिहे गर्ने प्रयास गरेका थिए । सबैकुरा राम्रोसँग गरिएको थियो, तर विदाईको समयमा, रोजीले आफ्नो जीवन गुमाइन ।
अक्सिजनका लागि भन्दै पिपलको बोटमा नै बास बस्न थालेपछि…
मोबाईल मात्र झुम्मिनेले हेर्नैपर्ने भिडियो, हुनेछ यस्तो नसोचेको दुर्घटना !
कोरोना कालमा भारतीयले विहे गर्न जे जुक्ति लगाए थाहा पाउने जो कोही हैरान !
बाबु एक्लैले ३५ किमि बोकेर परीक्षण गर्न लगे छोरीको लाश, न प्रहरी न आफन्त छिमेकीले दिए साथ
कोरोनाले बेहुलाकै निधन भएपछि विहे भोजका लागि ठिक्क भएका मानिसहरु मलामी जानुपर्यो
डण्डीफोर उपचारका लागि पास दिनुहोस् भन्दै दिएको निवेदन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
एक महिलाले एकै पटक ९ जना बच्चा जन्माएपछि…
बाबुको निधनपछि अन्तिम संस्कार स्थलमा नै जग्गा र सम्पत्तीको नाममा दाजुभाईबीच लडाई
कोरोनामा नियम तोडेको अभियोगमा मालिकसँगै कुकुर गिरफ्तार, जान्नुहोस् कहाँ भयो यस्तो अनौठो घटना
जंगलमा हराएकी महिला १ बर्ष जिवित भेटिइन् : बाँच्न गरेका प्रयासको बयानले दुनियाँ चकित !
पवित्र पहाडमा हे’र्नै न’सक्ने ह’र्कत गरेर भागे विदेशी जोडी, जताततै खोज्दै प्रहरी
कर्फ्यूमा पसले: पुलिस देखेर सटर लगाएर घर हिड्यो ग्राहक थुनिएको पत्तै पाएन, त्यसपछि के भयो !
अनलाइन कक्षा सकिएपछि क्यामेरा बन्द ठानेका शिक्षकले श्रीमतीसँग सबै काम सकेको भिडियो बाहिरियो